TSIRANGAINA, ANDRIAMPALIMANANA SY NY TARANANY
avy amin'i avy amin'i Voaharymandroso
Aiza no misy an’i Tsirangaina ?
Ankeribe sy ny tantarany
Ankeribe sy Rajaonarivelo
Ankeribe sy Ivohidahy
Tsirangaina dia vohitra iray eo antampon-kavoana, eo avaratr’Ankaratra; tanana atsimo andrefana indrindra amin’ny faritra Imerina atsimo, izay nantsoina hoe TANTSAHA
Ny lemaka sy renirano avy any Ankaratra mandalo eo andrefan’i Tsirangaina
Tsirangaina dia avy amin’ny teny Malagasy: TSY + RANGAINA.
Tendrombohitr’Anosisoa no tazana eo avarany, Ambohijoky no eo atsimo atsinanana, Vatobe no eo avaratra antsinanana, Soavina sy Mandrosoa ary ny kaomina Ambohimandry no eo andrefana ary Ankeribe no eo avaratra.
Anosisoa raha tazanina avy ao an-tanana’i Tsirangaina
Tsirangaina raha tazanina avy eny an-tendrombohitra Anosisoa
Tanimbary lehibe no tazana eo andrefan’ny vohitra ary mitomandavana mipaka hatrany Antaboaka Imeritsiatosika io velaran-tanimbary io.
Reniranon’Andromba miainga ao amin’ny tendrombihitr’Ankaratra no manondraka io tanimbary mitomandavana io mandrak’androany.
Ny tendrombohitr’Anosisoa eo avaratra kosa dia mitomandavana mianavaratra, mandalo eo ambony antsinanan’Ankeribe ary mandalo an’Ambohidava ary mipaka hatreny Antaboaka Imeritsiatosika.
Marihina fa eo amin’ny faritra avaratra fidirana ao Anosisoa dia ahitana vatolahy lehibe misaritsarintanin’i Madagasikara
Vatolahy misarin’i Madagasikara ao Anosisoa
Hadivory roa sosona no manodidina ny tananan’I Tsirangaina.
Ny vaton’ny vavahady avaratra sy atsimo dia mbola tazana ao.
Ny vavahady ao avara-tananan’i Tsirangaina
Ny vavahady ao antsimon-tananan’i Tsirangaina
Tsy misy trano miorina intsony ao Tsirangaina ankehitriny fa fiangonana FJKM Tsirangaina no hita eo andrefan’ny fitomiandalana izay ilevenan’Andriampalimanana sy ireo taranany. Io fitomiandalana io dia eo afovoan’ny Tsirangaina.
Raha avy ao Antananarivo ka ho any Tsirangaina dia lalana telo no azo isafidianana.
Ny voalohany sady lalana fahiny dia avy eo Antsahadinta no mandeha mamonjy ny lalan-tany ao atsimon’Antsahadita ary manaraka miankandrefana mandrapahatonga ao Tsirangaina. Lalana tokony ho adiny iray sy sasany dian-tongotra eo ho eo.
Ny lalana faharoa dia avy eo Vontovorona no miakandrefana. Sahabo ho dian-tongotra adiny roa eo dia tonga eo Ankeribe ary antsasakadiny dia tonga eo Tsirangaina raha avy eo Ankeribe.
Ny fahatelo dia: manaraka ny lalana mihazo an’Imeritsiatosika, ka eo no manaraka lalan-tany mandeha mianatsimo mandrapahatonga eo Ambohimandry.
Lalana antsasakadiny raha mandeha fiara Imeritsiatosika sy Ambohimandry. Eo Ambohimandry indray no mandeha mianatsimo manaraka lalan-tany ka tokony sahabo ho dian-tongotra antsasakadiny dia tonga eo Tsirangaina.
Andriampalimanana no nonina teo Tsirangaina. Izy dia zanaka faralahin’i Rafonizizoro avy eo Vatobe sy Rangorinimerina .
Dimy lahy sy dimy vavy izy ireo no iray tampo:
Izy 05 Lahy
Izy 05 vavy
Ara-tantara, raha nanjaka Andriamasinavalona dia nametraka an-dRangorinimerina zanak’anabaviny, tena tiany tokoa, honina teo Anosisoa. Nisy ala be teo taloha. Feno tsipoy ny teny an-tendrombohitra ary maro amalona teny amin’ny farihy ambany.
Mbola misy fandrika tsipoy eny Anosisoa amin’izao fotoana izao
Rehefa nanjaka indray Andriambelomasina, zokin’Andriampalimanana dia nasain-dRangorinimerina nipetraka teo ambany atsimon’Anosisoa, izany hoe Tsirangaina i Andriampalimanana faralahiny mba hiandry vodivona amin’ny faritra atsimon’Imerina Atsimo.
Andriampalimanana dia niteraka an’i:
Andriandambovololona, Andriantsimandehairery sy Andriamahery zanak’Andriampalimanana dia anisan’ireo Tantsaha mpampandry tany tamin’ny andro nanjakan’Andrianampoinimerina. Olona natokisan’Andrianampoinimerina izy ireo.
Rangorinimerina renin’Andriampalimanana no nanorina ny tanan’Ankeribe fony Andriambelomasina zanany lahiaivo nanjaka. Toerana famorina vatan-dehilahy io toerana io fahiny. Vatandehilahy matanjaka sy be hery hitrandraka iny farihibe sy honahona mitomandavana andrefana rehetra iny. Izany no antony niantsoan-dRangorinimerina ny tanana hoe Ankeribe.
Misy hadivory roa sosona ny vohitra Ankeribe saingy efa mihatototra izany ankehitriny.
SAndriamahery zanaka lahin’Andriampalimanana dia niteraka an’ Andriamandroso. ary Andriamandroso niteraka an-dRajaonarivelo. Io Rajaonarivelo zafiafin’Andriampalimanana io dia niainga avy eo Tsirangaina nandeha nonina teo Ankeribe niaraka tamin-dRajaonera.
Eo amin’ny faritra atsimon’ny tanana no ahitana ny trano nitoeran-dRajaonarivelo.
Eo antsinanan’ny tranon-dRajaonarivelo no misy ny tranon-dRajaonera.
Tranon’i Rajaonarivelo io lalotra tany io, eo anilany miloko fotsy ny tranon-dRajaonera
Misy kianja malalaka fikabariana toy ny teny Tsirangaina eo afovoan-tanana’Ankeribe. Mbola tazana eo afovoan-kianja ny vatobe fikabarian-drajaonarivelo fahiny.
Noho ny fitiavana ny tanana’Ankeribe dia nanapa-kevitra Rajaonarivelo sy Rajaonera fa samy hanao fasana tao an-tanan’Ankeribe.
Raha mitodika miantsinanana ianao raha mijoro eo ankianja dia mahita fasana roa.
Ny iray eo atsimo dia fasan-dRajaonera sy ny taranany ary ny iray eo avaratra izay misy trano manara dia an-dRajaonarivelo sy ny taranany.
Andriamandroso rainy dia nalain-dRajaonarivelo teny Tsirangaina ary nafindrany ao amin’ny fasany ao Ankeribe.
Ny Taranak’Andriampalimanana amin’i Rajaonarivelo
Taty aoriana kely, Rajaonarivelo niaraka tamin’ireto zanany ireto: Ravinaninoro sy Andriamandroso Ernest ary Rakotomanga Denis dia nila ravinahitra tany Ambohibary Sambaina.
Ravinaninoro sy Rakotomanga Denis dia namboly sy niompy. Andriamandroso Ernest dia dokotera mpitsabo tao Ambohibary Sambaina.
Nanao vohitra teo Sambaina Rakotomanga Denis, ny anaran’io vohitra io dia nataony hoe IVOHIDAHY. Ny toerana famboleny dia nantsoiny hoe: RASOARY TSARAFARA.
Mamy hoditra teo amin’ny fiaraha-monina Rakotomanga Denis. Mahalala azy ny olona marobe hatreo Ambohibary hatrany Ambohitrandriana antsinanan’Ampamoizankova any.
Ny nampiavaka azy teo amin’ny fiarahamonina dia ny tsy fahatahorana vazaha frantsay mpanjanan-tany tamin’izany fotoana izany.
Ity tantara fohifohy ity dia norafetina tamin'ny lovantsofina sy ny rakiteny nosoratan'ny Andriana Razafinandriamandroso Voahary (Rainibe), taranaka fahafiton’Andriampalimanana .